तस्वीरमा साझाका बिजुली बस
साउनभित्र प्रहरी समायोजन नभए संघर्ष गर्ने प्रदेशको चेतावनी
यी हुन् दाहालले प्रस्ताव गरेका पोलिटब्यूरो सदस्य
बिदामा बसेका अर्थ सचिव मरासिनी काममा फर्किए
‘घरजग्गा धितोको ऋण बिग्रिंदा अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने जोखिम छ’
फर्जी मत हाल्न खोज्दा बुढीगंगामा झडप, केही राउन्ड हवाई फायर
पद्मसुन्दरको पुस्तक ‘हिति प्रणाली’ सार्वजनिक
काठमाडौंमा गुड्न थाले साझाका बिजुली बस
रासायनिक मललाई प्राङ्गारिकले कसरी गर्ने विस्थापन?
स्वास्थ्य र राज्य
शेयर बजारमा अहिलेसम्मकै धेरै कारोबार, बजार पूँजीकरण रू. २४ खर्ब नजिक
शेयर बजारको कारोबारमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक धेरै रकमको कारोबार भएको छ। बिहीबार शेयर बजारमा रू. ६ अर्ब ११ करोड ६७ लाखको कारोबार भएको हो। बुधबार रू. ३ अर्ब ४१ करोडको शेयर किनबेच भएको थियो।
शेयर बजारमा उत्साह कायमै, २३ अंकले बजार बढ्यो
तिहार विदापछि खुलेको शेयर बजारमा बुधबार फराकिलो अंकको वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक २३.३२ अंकले बढेर १ हजार ७४२ विन्दु पार गरेको छ।
नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, कारोबार रकम झण्डै रू. ५ अर्ब
साताको अन्तिम दिन बिहीबार धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। लगातार उकालो लागेको नेप्सेमा बिहीबार झण्डै ११ अङ्कको वृद्धि भएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से १०‍.८२ अङ्कले वृद्धि भई एक हजार ७१८.४९ मा पुगेको छ। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ३.२७ विन्दुले उकालो लागेर ३३८.८९ मा पुगेको छ।
ब्यांकमा अधिक तरलता हुँदा बुधबार पनि बढ्यो नेप्से बुधबार पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्से बढेको छ। नेप्से १ दशमलव ७२ प्रतिशत अर्थात २८ दशमलव ८९ अंकले बढेर १ हजार ७६७ विन्दुमा पुगेको छ। मंगलबार पनि शेयर बजारमा फराकिलो वृद्धि भएको थियो।
शेयर बजारमा फराकिलो वृद्धि मंगलबार शेयर बजार परिसूचकमा फराकिलो उछाल आएको छ। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से करीब २६ अकंले बढेर १ हजार ६७८ विन्दु पार गरेको छ।
सात महीनामा शेयर बजारमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य रु. ६ खर्बले बढ्यो बन्दाबन्दीपछि लामो समय बजार पनि बन्द रह्यो । जब बजारमा कारोबार सुचारु भयो, नेप्से परिसूचक लगातार उकालो चढेसँगै बजार पुँजीकरण रकम पनि बढ्यो । बिहीबार बजार पुँजीकरण रकम रु. २१ खर्ब ९८ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । बुधबार त यो रकम रु. २२ खर्ब नाघेको थियो ।
नेप्से लगातार बढेर १६ सय अंक माथि दशैंअघि कारोबार हुने अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक ८.५४ अंकले बढेर १ हजार ६०६ विन्दु पार गरेको हो।
अर्थतन्त्र थला परेका बेला किन चम्किंदै छ शेयर बजार ? कोरोना संक्रमण महामारीको असरले अर्थतन्त्र शिथिल भएका बेला लगानीकर्ताले शेयर बजारमा अवसरको सिर्जना गरिरहेका छन्, जुन सुखद भए पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ।
शेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट बुधबार करीब १४ अंकले बढेको नेप्से परिसूचक बिहीबार ओरालो झरेर १ हजार ५९० विन्दुको हाराहारीमा ओर्लिएको छ।
चन्द्रागिरी हिल्स र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्ससहित दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको साधारण शेयर आउँदै साधारण शेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेका अधिकांश कम्पनी जलविद्युत् क्षेत्रका छन्। चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड, डिस मिडिया नेटवर्क, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड जस्ता कम्पनीले पनि साधारण शेयर जारी गर्ने तयारी गरेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कोरोना संक्रमित भएपछि संसारभरिको शेयर बजारमा गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि संसारभरिका ठूला शेयर बजार तथा अमेरिकी स्टक फ्युचर्समा गिरावट आएको छ।
शेयर बजार परिसूचकमा दोहोरो अंकको वृद्धि साताको अन्तिम दिन बिहीबार शेयर बजार परिसूचक २०.६१ अकंले बढेको छ। बीमा तथा विकास ब्यांक समूहमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदा नेप्से परिसूचक बढेर १ हजार ५७१ विन्दुमा पुगेको हो।
शेयर बजारमा उत्साह, नेप्से परिसूचक ३१ अंकले बढ्यो जलविद्युत्, होटल लगायत समूहका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेपछि साताको काराोबारको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक ३०.७८ अंकले बढेर १ हजार ५७२ विन्दु नाघेको छ।
शेयर बजारमा 'युवराज खतिवडा भ्रम' तोडियो, दोहोरो अंकको गिरावट आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से १०.४५ अंकले घटेको छ। निर्वतमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका कारण शेयर बजार ओरालो लागेको भन्ने दाबी गरिदैँ आइएपनि आइतबारको कारोबारले त्यो दाबीलाई गलत सावित गरेको छ।
अर्थतन्त्र शिथिल, शेयर बजारमा रौनक
कोरोना भाइरसले निम्त्याएको अप्ठ्यारोका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर रुपमा शिथिल भएपनि शेयर बजारमा भने आश्चर्यलाग्दो रौनक देखिएको छ ।
निषेधाज्ञाका बीच पनि शेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि, रु. २ अर्ब ६५ करोडको कारोबार
बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से २१.१० अंकले बढेको छ । खरिदमा लगानीकर्ताको उत्साहसँगै नेप्से परिसूचक १ हजार ४६२ विन्दुमा पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रमा शिथिलता, शेयर बजारमा उत्साह
कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको संकटका कारण अर्थतन्त्रमा गहिरो धक्का पुगेपनि शेयर बजार परिसूचक नेप्से भने लगातार बढिरहेको छ।गत सातादेखि लगातार बढिरहेको नेप्से मंगलबार ९.३४ अंकले बढेर १ हजार ४४१ विन्दुको नजिक पुगेको छ। निषेधाज्ञाका कारण आवतजावत बन्द भएपनि अनलाइनमार्फत सोमबार रु. १ अर्ब ८५ करोडको शेयर किनबेच भयो।
शेयर कारोबारका सबै भुक्तानी डिजिटलबाट मात्रै धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत दोस्रो बजारमा हुने कारोबारको रकम विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै भुक्तानी गर्न स्टक ब्रोकर्स एशोसिएसन अफ नेपालले शेयर लगानीकर्तालार्ई आग्रह गरेको छ।
नेप्सेमा २२.४० अंकको बढोत्तरी शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार २२.४० अंकले बढेर १ हजार ४६५ विन्दुमा पुगेको छ । होटल, जलविद्युत र म्युचुअल फण्डबाहेक अरु सबै समूह सकारात्मक हुँदा नेप्सेमा दोहोरो अंकको वृद्धि भएको हो ।
साताको अन्तिम दिन शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। लगातार तीन दिनदेखि गिरावट आइरहेको नेप्से आज १०.१३ अङ्कले बढेर एक हजार ४४२.६१ मा पुगेको छ।
बुधबार नेप्से दोहोरो अङ्कले घट्यो धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधवार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से १७.५० अङ्कले घटेर एक हजार ४३२.४४ पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ३.९० अङ्कले घटेर ३०३.१४ मा पुगेको छ।
शेयर बजारमा १५ अंकको गिरावट शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार १५ अंकले घटेको छ।
शेयर बजारमा तीव्र उतारचढाव, नेप्से परिसूचक घटेर बन्द शेयर बजारमा तीव्र उतारचढाव बीच नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ।
सर्किट ब्रेक लागेर शेयर बजारमा कारोबार स्थगित शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक ६ प्रतिशतले बढ्दा आजका लागि कारोबार स्थगित भएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नेप्सेमा उच्च वृद्धि शेयर बजार परिसूचक नेप्से नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो दिन ३२.४२ अंकले बढेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन नेप्से १५ अंकले बढ्यो चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम दिन बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से १४.९ अंकले बढेको छ । यो सँगै नेप्से परिसूचक १ हजार ३६२ विन्दुमा पुगेको छ।
सर्वसाधारणका लागि पाँच अर्बभन्दा बढीको साधारण शेयर बजारमा आउँदै इन्स्योरेन्स, जलविद्युत् लगायत कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि करीब रु. ५ अर्ब २५ करोड बराबरका साधारण शेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन्।
ब्यांकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिश ब्यांकका सहायक कम्पनीलाई शेयर ब्रोकरको अनुमतिपत्र दिने बाटो खुलेको छ।
शेयर बजार १० अंकले घट्यो शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार १०.१३ अंकले घटेको छ । मंगलबार करीब ३८ अंकले बढेको शेयर बजारमा बुधबार करेक्सन आएर नेप्से परिसूचक १ हजार ३२६.५३ विन्दुमा ओर्लिएको छ।